यौन स्वतन्त्रता : अपराध कि अधिकार ? - Loktantra Post Loktantra Post
यौन स्वतन्त्रता : अपराध कि अधिकार ?
Published On : 1 August, 2019 2:09 pm
वर्तमान समय र परिपेक्ष्य अनुरुप बढ्दै गइरहेको तर्क हो, यौन स्वतन्त्रता अपराध कि अधिकार ? युवा वर्गको स्वर सुन्ने हो भने यसलाई केही हदसम्म हामी अधिकार नै हो भन्न सहमत हुन्छौँ । तर, हाम्रो सामाजिक परिवेश, संस्कार र संस्कृतिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने यो एक अराजकता, आधुनिकताको नाममा भित्रिदै गएको एक विसङ्गति अर्थात अपराध नै हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
युवा समुदायमा बढ्दै गएको यौन कौतुहलताले गर्दा हाम्रो समाजमा परेको केही प्रत्यक्ष असरहरु र यसको कारणले उत्पन्न भएका केही सामाजिक समस्याहरु पनि हामी समक्ष सजीव नै रहेको हुनाले यसलाई अधिकार नभई अपराध नै मान्न सक्छौँ । आजका युवापुस्ताले विवाह अगावै राख्ने शारीरिक सम्बन्धलाई हाम्रो समाजले अनैतिक मान्दछ । जबकी युवाहरु एक अर्काको मन्जुरीबाटै सम्बन्ध बनाएका हुन्छन् । हामी सबैलाई थाहा छ, यो एक प्राकृतिक कुरा हो । तर, हाम्रो समाजले कुनै पनि किसिमको खुल्लारुपमा स्वर उठाई कुरा गर्न र खुलारुपमा यौन शिक्षाको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने काम भएको छैन ।
जब यौन स्वतन्त्रता अधिकार कि अपराध भन्ने तर्कको सिर्जना हुन्छ, तब हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा र हाम्रो संस्कार जस्ता कुराहरु उत्पन्न हुन्छन् । यौन स्वतन्त्रताले समाजमा अराजकता मात्रै सिर्जना गर्छ, यसले हाम्रो मौलिक संस्कारलाई बिगार्छ भन्ने तर्कहरु उत्पत्ति हुन्छ । यौन स्वतन्त्रता अधिकार कि अपराध भन्ने तर्क जति उत्पन्न हुन्छ, यसको तर्कक्षेत्र पनि त्यति नै व्यापक हुँदै जान्छ, जति धेरै मासबीच यो तर्क पेश गर्नुहोस्, त्यति नै धेरै यो तर्क अन्योलतातिर धकेलिँदै जान्छ ।
मैले पनि यो यौन स्वतन्त्रता अधिकार कि अपराध भन्ने विषयमा कहिले सोच्या थिइनँ । तर, यसै शीर्षकको एक लेख पढेपछि, सोच्नै पर्ने विषय हो भन्ने लाग्यो । यसै शीर्षकमा आनो पनि तर्क पेश गर्न इच्छुक भई मेरो तर्क प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको हुँ । मेरो दृष्टिकोणमा यौन स्वतन्त्रता केही हदसम्म अधिकार भएता पनि यो हाम्रो जस्तो विशाल संस्कृति र संस्कार भएको मुलुकमा यौन स्वतन्त्रताले समाजमा धेरै अराजकता ल्याउने भएकाले यो एक पनि अपराध नै हो ।
किन हामी २१ औँ शताब्दीको दिनमा पनि यौन स्वतन्त्रतालाई अपराध नै हो भनी तर्क दिइरहेका छौँ । कतै हामीले नै स्वतन्त्रतालाई आपराधिक क्रियाकलाप बनाइरहेका त छैनौँ । यस्ता प्रश्नहरुको सिर्जना गरेर यस विषयमा गहन अध्ययन गरिनु आजको आवश्कयता हो । किन यौन स्वतन्त्रता अपराध नै हुन्छ ? किन यसलाई अधिकारको रुपमा स्थापना गर्न सकिदैन ? भन्ने विषयमा गहन अध्ययन र छलफल गर्न जरुरी छ ।
विद्यालय एक शैक्षिक संस्था हो, जहाँ एक व्यक्तिलाई साधारण जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने शिक्षालाई विद्यार्थीमाझ प्रवाह गरिन्छ । तर, के विद्यालयमा यौन शिक्षालाई पनि अरु विषयमा जस्तै तर्क र छलफलको शीर्षक बनाइन्छ त ? सायदै गरिदैन यस विषयमा चर्चा । किनभने हाम्रा गुरुहरु यौन शिक्षाको बारेमा चर्चा गर्न लजाउनु हुन्छ, जसको कारण अधुरै रहन्छ हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने यौन शिक्षा । यदि विद्यालयमा एक शिक्षकले यौन शिक्षाको राम्रोसँग चर्चा गरिदिनु भएमा मात्रै पनि समाजमा यौन स्वतन्त्रता अधिकार नै हुने थियो र यस अधिकारको सही सदुपयोग हुने थियो । हामी गाउँघरमा यौन शिक्षाको कुरा गर्दैनौँ, जसको कारणले गर्दा हाम्रै अधिकार अन्तर्गत पर्ने यौन स्वतन्त्रता अपराध अन्तर्गत पर्दछ ।
आजको दिनसम्म पनि यौन शिक्षा एक त्यस्तो गोप्य शिक्षा हो, जुन विषयमा साथीभाई बीच छलफल हँुदैन । गाउँघरमा एक अर्काबीच गफको माहोल बन्दैन । यौन शिक्षाको सकारात्मक ज्ञान, मानसिक असर, उमेरजन्य सबलता, यौन रोग र यसबाट बच्ने उपायका साथै युवाहरुको सुरक्षित तथा भरोषायुक्त अभिभावकको स्थापना हुन सकेमा यसलाई अधिकारको रुपमा व्याख्या गरी यौन दुव्र्यवहार र यौनजन्य अराजकतालाई विस्थापित गर्दै एक सक्षम, सबल र शान्त समाजको स्थापना गर्न सकिन्छ ।
(गगन ढकालले भर्खरै देवी मावि विर्तामोडबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका छन् ।)